Dawn ဆေးခန်း | » Neighborhood Leaders in Change: Aurora’s Underserved and Anschutz’s Hopefuls Come Together at DAWN Clinic
အကျိုးစီးပွား Form ကို
July 25, 2015 အားဖြင့် Matthew Applegate
University of Colorado’s Anschutz Medical Campus isadominating feature of the landscape in North Aurora. The world-class facility, providing world-class care, is surrounded by one of the most economically depressed communities in the state. Using the resources of the Anschutz Campus, the newly-opened Dawn ဆေးခန်း is working to combat the disparity in health care for the area’s vulnerable citizens.
DAWN Clinic – Dedicated to Aurora’s Wellness and Needs – is part of the Dayton လမ်းအခွင့်အလမ်းစင်တာ operated by the လယ်ကွင်းဖောင်ဒေးရှင်း. The Opportunity Center was born of tragedy. Javad Marshall-Fields and Vivian Wolfe, two soon-to-be-married University of Colorado graduates, were murdered on Dayton Street in 2005. Not content to dwell on their loss, mothers Rhonda Fields and Christine Wolfe, became campaigners for social justice, victim advocacy, and education in the community. The Opportunity Center is designed to address the social factors that created the environment in which Javad and Vivian’s killers grew up and provide resources to help children to avoid risky behaviors.
1445 Dayton စိန့်.
သင် Dawn ဆေးခန်းများအတွက်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်ရှိပါက, go ကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာတွင်အတိုစစ်တမ်းဖြည့်စွက်ရန်.
သင်တို့၏နာမပါဝင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု., အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ် သငျသညျရက်ချိန်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နေကြသည်သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းကသင်၏တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်လျှင်.
ဘာသာရပ် စီစဉ်ခြင်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းရပ်ရွာကွင်းဆင်းနှင့် Advocacyအခြား